I-SPC, iSirius 1050 kunye neClever plug SmartHome yoPhononongo lweMveliso | Iindaba zeGajethi
I-SPC, iSirius 1050 kunye neClever Plug SmartHome yokuPhononongwa kweMveliso
UMiguel Hernandez | | Reviews
SPC ubheje kakhulu kwi «Smart Ekhaya», Tshata ngoluhlobo kunye nesiqubulo sakho Isizukulwana esiliSmart, Ukubonelela ngeemveliso namhlanje eziphantsi kobundlobongela ngenxa yeenkonzo zokuncedisa kwilizwi ezinje nge-Echo range ukusuka kwi-Alexa kunye neKhaya likaGoogle elisemsebenzini, yiyo loo nto begqibe kwelokuba babheje kwiimveliso ezahlukeneyo ze ekhaya njengezinto zokucoca iirobhothi esele sithethile ngazo apha.
Sinezandla zethu kwezona mveliso zimbini zisisiseko esinokungena ngazo kwihlabathi lekhaya elinobuhlakani okokuqala, Fumana nathi i-SPC Sirius 1050 bulb smart kunye neqabane layo iClever plug, ehambelana ne-Alexa kunye nokunye okuninzi.
Njengamaxesha onke, kuninzi esinokukuthetha ngezixhobo zombini kodwa Siza kunikezela amacandelo ahlukeneyo ngalinye lawo ukuze ulinganise ukuthengwa kwakho kunye kunye nangokwahlukeneyo. Siza kuwahlalutya ngononophelo amacandelo anje ngezixhobo, ukungqinelana nokusetyenziswa ngumntu wesithathu kwaye ngokuqinisekileyo ixabiso, lelinye lawona manqaku agqibeleleyo xa kufikwa ekufumaneni esi sixhobo okanye esinye kukhuphiswano. Masiye apho, qaphela kuba ezi inokuba zimbini zeemveliso ezikwenza ukuba ubonakale kwilizwe lekhaya elinobuhlakani.
1 I-SPC Sirius 1050
2 I-SPC Clever Iplagi
3 Uluvo lomhleli kunye nokuhambelana
I-SPC Sirius 1050
Sifumana ibhalbhu yodidi yeklasikhi, iyafana kakhulu ne ezinye esele sizichazile apha kwaye bayinxalenye yesamente yokukhanya okulula kunye nokulula. Isitshixo ngokuchanekileyo kukuba bajongeka njengezibane eziqhelekileyo zokukhanya, eneneni zibonisa isokethi ye-E7 yakudala ngobukhulu obuphakathi obuya kukuvumela ukuba usibeke phantse kuso nasiphi na isibane semveli, nokuba yidesika, umgangatho okanye isilingi. Ngaphandle kwamathandabuzo awuzukutshintsha izixhobo zakho zokukhanyisa ukuze ukwazi ukonwabela ukukhanya okrelekrele kwaye yinto leyo ithathelwe ingqalelo yi-SPC njengezinye iimveliso ezininzi.
Xa sifumana ibhalbhu eyenziwe ngeplastiki kwisiseko sayo, kodwa ikwenziwe ngezinto zeplastiki kubume bayo bangaphandle, kwaye Xa sonwabela ukukhanya kwe-LED sinokubakho kokubandakanya izinto ezothusayo kuba ayizukuvelisa naluphi na uhlobo lokufudumeza ukugqithisa ukubeka emngciphekweni ezi ntlobo zezixhobo. Le ngxowa yeplastiki inobubanzi obungama-70 eemilimitha iyonke kunye nobude bebhalbhu yeemitha ezili-133 ukusuka kwisidibanisi ukuya esiphelweni sendawo yokukhanyisa.
Kufuneka iqatshelwe ukuba inobunzima obuncinci xa sithelekisa nee-bulbs ezivela kwezinye iifemu, kwaye ufakelo lulula kakhulu. Ukupakishwa kusenokungabi yiprimiyamu njengoko sinokulindela, kodwa i-SPC ijolise ngakumbi ekulawuleni idemokhrasi kwezi ntlobo zeemveliso. Ibhokisi yekhadibhodi ebhityileyo elingana nebhalbhu esikhumbuza ngeebhokisi zebhalbhu yodidi, kwaye ngaphakathi ibandakanya zombini incwadi encinci yokufundisa ukumisela ibhalbhu yemveliso kunye nemveliso uqobo, akukho nto iyenye kule mveliso, kwaye kukuba asizukuyidinga, icace gca kuthi.
Okokugqibela sifumana ukukhanya okukhanyayo kwe Iimitha ezili-1050 zokugcina igumbi eliqhelekileyo njengegumbi okanye iofisi, Itya i-10W oyinika iklasi ye-A + yamandla nangona inika amandla alinganayo ebhalbhu ye-75W. Ngaphandle kwento yokuba iphakheji ilumkisa ngobushushu bombala we-W2700K, siyakhumbula ukuba sinethuba lokukhetha umbala esiwufunayo kumakhulu ezigidi zamathuba ngokusisebenzisa esiza kuthetha ngako kamva, kunye namagunya ahlukeneyo okukhanyisa phakathi kwe-1% ne-100%, kunye nomthunzi omhlophe esifuna ukuwukhetha kwigumbi lethu, Singayenza yonke le nto ngokwethu isicelo se-iOS kunye ne-Android, okanye sinokukhetha iAmazon Alexa, uMncedisi kaGoogle okanye IFTTT. Unako yithenge kwiAmazon ukusuka kwi-26,15 euro, okanye kwiphepha lakho Kwiwebhu.
I-SPC Clever Iplagi
Iiplagi ziyimveliso yesibini ngokuzimela oza kungena kuyo kwilizwe lekhaya eli-smart, kwaye sinombulelo kubo ukuba siya kuba nakho ukwenza iinkqubo zemveliso ezingahambelaniyo nokusetyenziswa okwahlukeneyo njengokufudumeza, ithemos kunye nayo nayiphi na enye isixhobo. Koko kukuthi, Kufuneka sivale iplagi ye-SPC Clever kumandla, kunye nemveliso esifuna ukuyenza "ikrelekrele" kwi-SPC Clever plug, ngale ndlela siza kuthatha ulawulo olupheleleyo. Kwimveliso ekhethiweyo kwaye siza kuthatha isigqibo sokuba sivula nini, njani kwaye kutheni. Ukongeza, le mveliso iyahambelana noMncedisi kaGoogle, iAmazon Alexa, IFTTT kunye nesicelo sayo seSPC.
Sineplagi eza ebhokisini efana naleyo ibhalbhu esele ikhankanyiwe, yenziwe ngeplastiki emhlophe ngokupheleleyo. Ngasemva sineplagi yendoda yendabuko, kwaye ngaphambili iplagi yabasetyhini ukuze sikwazi ukudibanisa imveliso esiyifunayo. Sinezibane ezibonakalisiweyo ngaphambili. enye ejikeleze iqhosha eliya kusivumela ukuba sinxibelelane ngesandla nemveliso (kwimeko apho sishiywe ngaphandle koxhumano lwe-WiFi) kunye nesinye isalathisi sokusebenza kwayo. Ngokubhekisele kwimilinganiselo sine-54 mm x 74 mm x 103 mm.
Inamandla okumelana nokukhupha ii-amps ezili-16, inamandla angama-230 W kwaye iya kukhupha amandla aphezulu angama-3680 W uwonke. Iplagi iyahambelana nenethiwekhi esemgangathweni kwaye ayizukubeka naluphi na uhlobo lwengxaki. isasazeke xa uyisebenzisa. Enkosi kuyo kunye nokusetyenziswa kwayo (kunye nokuhambelana ne-Alexa) siya kuba nakho ukuba zizilumko ukusuka kwisibane ukuya kwisifudumezi, singavula imveliso edityanisiweyo zombini ngonxibelelwano lwayo ngokwasemzimbeni nangeendlela ezahlukeneyo zedijithali ezithi ziphakamiswe yi-SPC . Ungayifumana le mveliso kwiAmazon ukusuka kwi-22,90 euro kwiAmazon okanye kwiphepha lakho Kwiwebhu.
Uluvo lomhleli kunye nokuhambelana
Njengoko besesitshilo apha ngasentla, i-SPC izenzile ezi zixhobo ukuba zihambelane neenkonzo eziphambili zekhaya kunye neenkqubo:
I-SPC IoT usetyenziso
Kubalulekile ukusebenzisa usetyenziso I-SPC IoT iyafumaneka for Android kunye iOS Ukuze uqwalasele isixhobo kunye nenethiwekhi yakho yeWiFI kwaye unxibelelane ngokuthe ngqo kunye neenkonzo zakho ze-Alexa okanye zeKhaya likaGoogle, ezilula, sibhalisa nje, khetha imveliso kwaye silandele amanyathelo aboniswe kwiscreen, ayinalahleko okanye ubunzima, ngaphandle kokuba kwimeko yeAmazon Alexa kuya kufuneka songeze iSakhono esiboniswa yi-SPC.
Kwiingcinga zam sijamelene neemveliso ezifanelekileyo ukungena kwihlabathi lekhaya elinobuqili, ngolwakhiwo olulungileyo kunye nokuhambelana okungagungqiyo. Nangona kunjalo, kufanele kuqatshelwe ukuba mhlawumbi ixabiso alikho "kwintando yesininzi" kwinto enokulindeleka kwi-SPC kwaye sikwazile ukulixabisa uphawu ngamanye amaxesha, kuba sifumene iimveliso zexabiso elifanayo ngu-Ikea okanye uKoogeek. Nangona kunjalo, uncedo olukhulu lwe-SPC kukuba sinokuyifumana kwiindawo ezinje ngeWorten, iCarrefour okanye iMediaMarkt ngezibonelelo zayo zokuhambisa kunye neziqinisekiso.
Ukuhambelana neenkqubo ezahlukeneyo
Ixabiso likhululeke kakhulu
Ukungabikho kweApple HomeKit
Ukupakisha okuhle kakhulu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-SPC, iSirius 1050 kunye neClever Plug SmartHome yokuPhononongwa kweMveliso
I-FaceTime bug yayisezandleni ze-Apple kangangeentsuku